Amadoda amaNdebele azi ukuzalisa nje - Grace | News24
Harare - Unkosikazi kaMengameli Robert Mugabe, uGrace Mugabe, usekhulume wathi amadoda aseMatabeleland, eZimbabwe, into ayaziyo nje ukushadelwa nokukhiqiza izingane esikhundleni sokuthi athuthukise izindawo ahlala kuzo.
UGrace, osanda kuthweswa iziqu zobudokotela e-University of Zimbabwe, ukusho lokhu phambi kwezinkumbi zabantu ababalelwa ku-4 000 eGwanda, ngoMsombuluko, kubika i-myzimbabwe.
UGrace ushiye angalazi emadodeni amaNdebele wathi amandla kakhulu ekuganweni nasekukhiqizeni izingane eziningi bese eyahluleka ngisho ukuzinakekela.
OLUNYE UDABA: UGrace Mugabe uqhoshe ngeziqu ethula inkulumo
"Kuyinto eyejwayelekile lana ukuthola indoda inamakhosikazi nga-10, msangano muni lowo?” esho.
Ukugxeka kukaGrace amadoda angamaNdebele kuphelezelwe yimikikizo, okuyinto ebingalindelekile.
UGrace uphinde wasola la madoda ngokungafuni ukuzithuthukisa, kunalokho avele akhethe ukuya eGoli ayofuna